Talefoonada Smartphones. Miyuu Sababta U Yahay Inaad Ka Cabsataan? - Muuqaalka muuqaal ee ugu hooseeya
Hackers iyo spammers waxay ku guuleysteen in ay abuuraan shabakadaha casriga ah ee zombie. Waxaa jira fursado ah in qalabkaaga mobile-ka uu qaadsiin doono adiga oo aan haysan aqoontaada oo laga yaabo inaad lumiso xogta waqti aan waqti lahayn. Botnets ayaa la soo sheegay inay saameyn ku yeesheen tiro badan oo kombuyuutaro ah iyo taleefannada gacanta oo bilihii ugu dambeeyay. Ross Barker, 8 khabiir khabiir ku ah, ayaa sheegay in spamers iyo kambiyuutarrada ay isku dayayaan in ay isticmaalaan moobiilka habka ama kuwa kale oo ay waalan yihiin inay lacag ka helaan baadda - dr scholl gr. Boqollaal kun oo mashiinnadood ah ayaa ka shaqeynaya aduunka oo dhan, iyo waxyaabo badan oo ka mid ah dhacdooyinka ayaa lagu soo warramey Maraykanka. Nasiib wanaag, marnaba lama helin kumbuyuutarka lana adeegsado telefoonnada gacanta. Shirkadda Ammaanka Symantec waxay leedahay xarunteeda xarunteeda California. Khubarada shirkadan ayaa sheeganaya in barnaamijyada loo yaqaanno Sexy Space ay yihiin khariidado xun oo ay soo saareen hackers for users users.
Farriimo aan ammaan ahayn
Xarunta Galmada waxay fariin qoraal ah u dirtaa dad badan oo isticmaala, iyagoo soo jiidanaya gabar kulul oo qurux badan internetka. Fariimahaas waxaa ku jira xiriiro, gabarna waxay ku weydiineysaa inaad gujiso xiriiradaas si aad u soo dejiso sawiradii ugu dambeysay. Haddii aad gujiso xidhiidhadaas isla markaana fariin isku mid ah u dirtid saaxiibbadaa, macluumaadka iyo macluumaadka xasaasiga ah ee lagu keydiyay telefoonkaaga ayaa u badan inay jabsadaan..
Fayrasyo ​​badan oo SMS ah ayaa loo direy dadka isticmaala adduunka, laakiin Sexy Space waa khatar aan caadi aheyn oo khatar cusub ah oo la xiriirta server-yada dhexe waxayna xakameysaa hawlaha tiro badan oo kombiyuutar iyo qalab mobile ah. Khasaaradu waxay kantaroolaan kantaroolka taleefoonkaaga casriga ah, iyaga oo ku faafaya botnets dhexdeeda iyo abuuritaanka niyad jab. Haddii shabakadda gawaarida qabta cudurka ay ka jawaabto amar fog, waxaa loo yaqaannaa botnets true
Agaasimaha Symantec ee amniga Zulfikar Ramzan ayaa sheeganaya in aysan jirin wax macluumaad ah oo ku saabsan sida Sexy Space u shaqeyso iyo sida uu u qabsado casriga adduunka oo idil. Laakiin hal shay oo ka mid ah qalabka oo idil waa in ay u badashaa baaskiiladaha mobile-ka.
Ben Feinstein oo ka socda Howlaha Amniga ayaa sheegay in kombuyuutarrada iyo telefoonada casriga ah loo beddelay maalin walba botnets. Wuxuu u shaqeeyaa sidii injineernimada kombuyuutarka, shirkaduna waxay ku taallaa Georgia. Boorsooyinka moobaylka ayaa laga yaabaa in ay mustaqbalka khatar weyn ku keenaan dadka isticmaala. Tusaale ahaan, khabiiro waxay caddeeyeen in spamersku awood u yeelan karaan qaybo ka mid ah casrigaaga adigoo daadinaya iyada oo fariin qoraal ah oo aan faa'iido lahayn. Qalabka cudurka qaba ayaa markaa loo isticmaalaa si loogu badalo xogta shabakada kombiyuutarka nadiifka ah. Koox khubaro ah oo ka tirsan Errata Amniga ayaa qeexay in khaniisiinta ay inta badan ku weerareen iPhones iyaga oo adeegsanaya fariimo galmo ah. Shirkadan ayaa ugu horreyn ku shaqeysa Atlanta waxayna leedahay xafiisyadeeda hoose iyo laamiyada adduunka oo dhan. Koox isku mid ah oo khubaro ah ayaa sidoo kale sheegaysa in cudurka qabow ee loo yaqaan 'iPhones' loo isticmaalo si loo beddelo kaabayaasha shabakadaha WiFi. Xitaa markaad rakibto barnaamijka antivirus, waxaa laga yaabaa in aadan awoodin in aad ilaaliso qalabka mobile sida spam uu ku bilaabmayo foomka farriimaha; iyo farriimaha lama joojin karo illaa aad ka joojiso aqoonsiga dadka soo diraayo. Nidaamyadda wireless-ka iyo qalabka kombiyuutarka ayaa sidoo kale ku dhacay fayraskan. Kantaroolad dembiile ah ayaa isticmaali kara Sexy Space si loo jebiyo shabakadaha kombiyuutarada gudaha.